Yemen oo codsatay faragelin Iskaashiga Khaliijka – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Wasiirka arrimaha debadda Yemen, Yiyaadh Yaasiin ayaa dalalka Khaliijka ka codsaday iney dalkiisa ku sameeyaan faragelin milateri si loo joojiyo is-ballaarinta kooxda Shiicada ah ee Xuuthiyiinta.
Codsiga Yemen ayaa kusoo beegmay xilli wasiirka arrimaha debadda Sacuudiga Sacuud Alfeysal uu ka digay iney ku dhaqaaqi doonaan tilaabooyin lagu taageerayo madaxweynaha la baacsanayo ee Yemen Cabdi-rabi Mansuur Haadi, kuna sugan magaalada Cadan.
Jabhadda Xuuthiyiinta ayaa bishii hore la wareegay caasimadda dalka ee Sanca, waxeyna xabsi guri geliyeen madaxweyne Haadi, kuna qasbeen inuu ku dhawaaqo is casilaad, hase ahaatee mar dame ayuu ka baxsaday, una gudbay magaalada Cadan oo ah halka uu kasoo jeedo.
Xuuthiyiinta ayaa wacad ku maray iney uga dabategayaan Cadan, waxeyna labo maalmood ka hor la wareegeen magaalada Taciz, taasoo u sahli karta iney uga sii gudbaan Cadan.
Qaramada Midoobay ayaa ka digtay in Yemen qarka u saaran tahay dagaal sokeeye.
Wasiirka arrimaha debadda Yemen, Riyaadh Yaasiin oo wareysi siiyey wargeyska Asharqal Awsat ayaa dalalka ku mideysan Golaha Iskaashiga Khaliijka ugu baaqay iney faragelin ku sameeyaan dalkiisa, inkastoo uusan qeexin nuuca faragelinta.
Wasiir Riyaadh Yaasiin ayaa Qaramada Midoobay iyo Khaliijka ka codsaday in la sameeyo dhul ka caagaan duulimaadka, kadib markii diyaarado duqeeyeen qasriga madaxweynaha ee magaalada Cadan.
Wasiirka arrimaha debadda Sacuudiga, Sacuud Alfeysal ayaa ku hanjabay in Sacuudigu tilaabo looga hortegayo gardarrada Xuuthiyiinta qaadi doono haddii dhibaatadan xal loo waayo.
Sacuudiga ayaa cabsi weyn ka qaba in dalka Yemen ay la wareegaan kooxda Xuuthiyiinta, kuwaasoo taageero badan ka hela dalka Iran oo naceyb weyn dhaxyaalo Sacuudiga.